Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): 2012
ကြက်သွန်ဈေးနိမ့်ကျလို့ ကြက်သွန်စိုက်တောင်သူ ပအိုဝ်းများ အတိဒုက္ခရောက်
By ခွန်ထီးခမ်း | ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်)။ ။ ယခုနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကြက်သွန်ဖြူကို အဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ ပအိုဝ်းတောင်သူလယ်သမားများမှာ ကြက်သွန် ဈေးနှုန်းမရှိသည့်အတွက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း မိမိတို့ကြက်သွန်ကို သွန်ပစ်ရတော့မည့်အလားအလာသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။
By Kanbawza Win | December 30, 2012
Inacountry like Burma, where the ruling Generals still harbors the savage mentality and irreligious, astrology is somewhat likeasort ofareligion and playsacrucial part in steering the country’s path.
ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာ မြေကွက်အရှုပ်တော်ပုံကို မြေပိုင်ရှင်က တရားရုံးကိစ္စများနှင့် စရိတ်များစွာကုန်ကျနေ
By ခွန်ထီးခမ်း | ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး။ ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဦးချစ်လယ်က ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ဗဟိုမှ တပ်စခန်းများ တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်ဆိုပြီး ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆိုက်ခေါင်စံပြကျေးရွာ အနောက်ဘက်ရှိ ခြံပိုင်ရှင် (၁၁) ဦးပိုင်မြေကွက်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
By ခိုင်လင်း (မေဃ၀တီ) | ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရာဇ၀င်ကို အခြေခံပြီး “ မြန်မာအစ တကောင်းက “ လို့စကားပုံဖြစ်လာတယ်။ တကောင်းရာဇ၀င်က အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း သာကီဝင်မင်းမျိုးနဲ့စခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ သာကီဝင်မျိုးတူစုအတွင်း မကျေမနပ် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလို့ ဇာတိမြေ အိန္ဒိယကို စွန့်ခွါပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ တကောင်းကိုထွက်လာကာ တိုင်းပြည်တည်ထောင်တယ်။ အဲဒီ မင်းမှာ အမွေခံသားနှစ်ယောက် နန်းလုကြတယ်။ အငယ်က အထက်အညာကို အနိုင်ရပြီး အကြီးက ဓည၀တီ(ရခိုင်)ရောက်သွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီရာဇ၀င်ကို အခြေခံပြီး ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂ လီတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို ကုလားတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်မှာ ပြည်သူများ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် မြေကွက်များ ရောင်းချပေးရန် စေတနာရှင်တစ်စုမှ ဆောင်ရွက်နေ
By ဖိုးဇေ (တောင်ကြီး) | December 27, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၊ တောင်ကြီးခရိုင် ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ လုံခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းလွယ်ကျေးရွာ၊ ပါပန့်ဂူသွားလမ်းတွင် မြေကွက်များ ပြုလုပ်ပြီး အခြေခံလူတန်းစားများ အဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အမည် မဖော်လိုသော စေတနာရှင်တစ်စုမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မဲနယ်တောင်ဒေသရှိ သမိုင်းဝင် နမ့်ဟုတ်ကျောင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ပွဲတော်ကျင်းပ
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ဟိုပုံးမြို့နယ် ၊ မဲနယ်တောင်ဒေသ နမ်းဟုတ်ကျောင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပွဲတော်ကြီးကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပကြောင်း သိခဲ့ရပါသည်။
By ပအိုဝ့်လေး(သထုံ) | December 22, 2012 | ရွှေမြန်မာမီဒီယာ
သထုံမြို့ရောက်ရင် သထုံမြို့ရဲ့ အရှေ့ တောင်ဘက်မှာ နေမိန္ဒရတောင်တည် ရှိပါတယ်။ နေမိန္ဒရတောင်မှာ တစ်ချိန်က ရဟန္တာကြီးရယ်လို့ သမုတ်ခဲ့ကြတဲ့ စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးက၀ိနှင့် ညောင်လွန့်တောရဆရာတော် ဦးမေဓါဝီတို့ အခက်အခဲများကြားမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ၁၂၈၄ ခုနှစ်က သိမ်ကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ယခုအခါမှာတော့ သိမ်ငုတ်များကိုသာ တွေ့ရတော့မှာပါ။
တောင်ကြီးမြို့ မြို့မဈေးကြီးအနီးက အများပြည်သူ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားတဲ့နေရာမှာ ကားတွေဖြင့် ပြည့်နှက်နေ
By ဖိုးဇေ | ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့မဈေးကြီးမှာ ယခင်က ဆိုင်ကယ်အပ်နှံရန်နေရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေလျှက်ရှိသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးနှင့် ဈေးကြီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မျာနဲ့ ပြည့်နှက်နေလျှက်ရှိပြီး ကန်ထရိုက်တို့ရဲ့ ဆိုင်ကယ်အပ်နှံဖို့ ပြောဆိုအော်ဟစ်နေတာတွေဟာလည်း ဈေးသွားဈေးလာများနှင့်တကွ အများပြည်သူများရဲ့ စိတ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ရှိပြီလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
Time to Rethink the US policy on the Uncivilized Burmese Generals
By Kanbawza Win | December 20, 2012
Burma ruled by the Burmese Generals for more than halfacentury seems to be s the only country in the whole wide world to declare war on humanitarianism.
ခိုင်လင်း (မေဃ၀တီ) | ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးအကျဆုံး ကျောက်စာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပျူကျောက်စာ၊ ရခိုင်ကျောက်စာ၊ မြန်မာကျောက်စာတွေကို ဗြာဟ္မီ၊ သကဋ စာများနဲ့ရေးထိုးထားခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဗြာဟ္မီ၊ သကဋစာပေဖြင့် ရေးထိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ပျူတွေ၊ ရခိုင်တွေ၊ မြန်မာတွေဟာ ကုလားတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တဲ့ ပြောနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေရှိလာတယ်။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကို သာမန်စာဖတ်ပရိဿတ်တွေကို သိသလောက် ရှင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်လို့ကို မရသေးဘူး
ရှမ်းပြည်နယ် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး (ရလလဖ) ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်စိန်ရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ရလလဖ)ကို ၁၉၂၉ ခုနှစ် ပဒေသရာဇ်ဆန့်ကျင် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ် အာဏာသိမ်း အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေးအင်အားစု များနှင့်အတူဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသော (ပအမဖ)အဖွဲ့အား အခြေခံ၍ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီခေတ် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ခွင့်ပြုချက်အရ ပဒေသရာဇ်စနစ်အရှင် အချို့သော စော်ဘွားများဟာ ရှမ်းပြည်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဘုရားပွဲနဲ့ အသုဘပွဲတွေကအစ လောင်းကစားပွဲများ ထည့်သွင်းကစားစေခြင်း၊ ပညာရေးနဲ့ ဗဟုသုတ အသိအမြင်နည်းပါးအောင် မျက်စိမိတ် နားပိတ်ထားစေခြင်း၊ ဘိန်းစတဲ့ မူးယစ်သေစာတွေနဲ့ မှိုင်းမိစေခြင်း၊ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ အခွန်အကောက်အမျိုးမျိုး အဓမ္မ ကောက်ခံစေခြင်း စသဖြင့် မတရား ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ် တပ်ရင်းအမှတ် ၄၂၆ မှ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦး အပြစ်မဲ့ရွာသားကို ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်
By ခွန်စိုးပေ | ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်အခြေစိုက် စစ်အစိုးရခြေမြန်တပ်ရင်းအမှတ် ၄၂၆ က ဟိန်းဇာနည်ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ညနေအချိန် ထီထဲုင်ထိုးမီးရထားဘူတာမှာ ရွာသားနှစ်ဦးကို အကြောင်းမဲ့ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ သထုံရောက် လူမှုရေးနှင့်ပရဟိတပညာရေးအလှူပေး
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး)၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့ရှိ ပအိုဝ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု(ဗဟို) ဌာနခွဲက ဦးဆောင်ပြီး ခွန်တန်နွယ် ပအိုဝ်းလူငယ်ကွန်ယက်တို့ ဦးစီးကျင်းပသော နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ် ပအိုဝ်းတိုင်း၇င်းသူလေး နန်းခင်ဇေယျာနှင့် လူငယ်များတွေ့ဆုံပွဲ တစ်ရပ်ကို သထုံမြို့ သူဝဏ္ဏခန်းမတွင် ပြီးခဲ့သည် (၁၂ ၊ ၁၂ ၊၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Posted by admin@paomagazine 1 comments
ရှမ်းပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ( ရ.လ.လ.ဖ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဘ ခွန်စိန်ရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဘယ်သူမှ အခုထက်ထိ မပြောကြသေးဘူး။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ၀ိုင်းဝန်းဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဟာ မုချရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
သံဃာများ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် တောင်ကြီးမြို့ အထွေထွေသပိတ်အစီအစဉ် ရပ်နားခဲ့ရ
By ဖိုးဇေ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ လောကမာန်အောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးခေမာနန္ဒသည် လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံဃာတော်များ
ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားသည့် အချက်သုံးချက်အား နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တစ်စုံတစ်ရာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိလျှင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီ ကျော်လွန်ပါက တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ စာသင်တိုက်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှ ရဟန်း/သာမဏေများစုစည်းပြီး
အထွေထွေသပိတ်အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ လမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီး တောင်းဆိုချက် (၃) ချက်အား
သံပြိုင်အော်ဟစ်တောင်းဆိုရန် ၁၂ ရက်နေ့တွင် လောကမာန်အောင်ကျောင်းတိုက်တွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပဒေသရာဇ်စနစ်သည် ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်တွင် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား၏ အမွေခံ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စနစ်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နိုင်ငံခြားဘာသာရပ်ကဏ္ဍမှာ ထိုင်းဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသူများ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် (Yangon University of Foreign Languages-YUFL) နိုင်ငံခြားဘာသာရပ် သင်ယူနေကြသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွင် ထိုင်းဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်းစား လေ့လာသင်ယူကြသူများစွာရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သော ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် နာမည်ကြီး ထိုင်းသတင်းစာ တစ်ခုဖြစ်သည့် ပရချာချတ် ထုရကိစ်မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
တောင်ကြီးမြို့သံဃာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲမှာ မပါဝင်ပေမယ့် ဒကာနဲ့ပေါင်းပြီး လမ်းခင်းကုသိုလ်ယူ
ဖိုးဇေ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့မှာ နိုင်ငံ့အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီတန်းလှည့်လည်တဲ့ သံဃာများရှိသလို လောကီအကြောင်း စိတ်မ၀င်စားပဲ ပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီး လမ်းခင်းကုသိုလ်ယူနေကြတဲ့ သံဃာများလည်းရှိပါတယ်။
By ဖိုးဇေ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်သည့်သံဃာတော်များ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့်ကိစ္စအပေါ် ရှုပ်ချဆန့်ကျင်သည့်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတရပ် ယနေ့ တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
By Kanbawza Win | December 4, 2012 | Taunggyitime
Even as the International News headlines were glue to Syria and the Middle East, the Burmese quasi military government initiated by the monk killer Thein Sein steals the limelight by cracking down the peaceful monks and people demonstrating in Letpadoung Mines.
စနေနေ့ | ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
လွိုင်လင်ခရိုင် ပင်လုံမြို့နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်း၊ မိုင်းပွန်မြောက်ဘက်ခြမ်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်နှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသရှိရွာများတွင် စက်တင်ဘာလမှ စပြီး RCSS အဖွဲ့မှ
ရွာသားများကို ခေါ်ယူစုဆောင်းပြီး လွယ်တိုင်းလျှံသို့ အတင်းဓမ္မခေါ်ဆောင်လျှက်ရှိနေကြောင်း ရွာသားများပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
Thai PBS ရုပ်သံလှိုင်းမှ ကျင်းပသည့် Edutainment Festival မှာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိပြီး လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားကောင်းသည့် Thai PBS ရုပ်သံလွင့်ဌာနမှ ပထမဆုံးကြိမ် ကျင်းပသည့် Edutainment Festival ပွဲတော်ကြီးမှာ ပြည်ထောင်စုဖွား ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် နီပေါ (နေပါလီ) တိုင်းရင်းသားများလည်း မိမိတို့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် တင်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပအိုဝ်းပါတီ (PNO) ရဲ့ မြေသိမ်းမှုဆိုင်ရာပြောဆိုချက်ကို တောင်ကြီးမှာ တုံ့ပြန်
Saturday, December 01, 2012 | Sithu Linn | Irrawaddy
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ခေါ် PNO ပါတီ အတွင်းရေးမှုး(၃) ဦးမောင်ပေါင်း မကြာသေးခင်က ဂျာနယ်တစောင်သို့ ပြောဆိုချက်များသည် ဒေသခံပြည်သူများ ခံစားနေရသည်နှင့် တလွဲစီဖြစ်နေကြောင်း တောင်ကြီးမြို့ ထီဟန်ဆေး ကျေးရွာ ဒေသခံများက ပြောသည်။
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်နှင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ “မေးဗို” ပူဇော်ပွဲ
ခွန်သောမတ်စ်(တောင်ကြီး) | နိုင်ဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် | ဆောင်းပါး
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးသက်ဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြရာ (၁၂) လ ရာသီပွဲတော်တွင် တင်းဆောဝ်မွူးလာ (ခေါ်) တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန ခေါ် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲများကို ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပီပီ အလေးအနက်ထားကာ စည်စည်ကားကား ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိကြပါသည်။
ပအိုဝ်းများ သထုံမြို့ရွှေစာရံစေတီမှာ ဆွမ်းဆန်စိမ်းနဲ့ ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲကျင်းပ
နောင်ခမ်းခါ | နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှူအဖွဲ့ (ဗဟို) ဌာနခွဲသထုံဒေသနှင့် ခွန်တန်နွယ်လူငယ်ကွန်ယက်တို့ ဦးစီးပြီးတော့ ၁၃၇၄ ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် (နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်) နေ့ သထုံမြို့လည်ရှိ သမိုင်းဝင်ရွှေစာရံစေတီတော်မြတ်ကြီးပရိဝုဏ်အတွင်းမှာ လေးဆူဓာတ်စံရွှေစာရံစေတီတော်မြတ်ကြီး ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲနဲ့ လေးဆူဓာတ်စံရွှေစာရံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အခန်းအနားတရပ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
KBZ Group မှ လေယာဉ်သစ်များ ၊ ဘဏ်ခွဲများ တိုးချဲဖွင့်လှစ်နိုင်မှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲကျင်းပမည်
By ဖိုးဇေ | နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးဟု ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးပြော
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | နိုင်ဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဟာ တရားဝင်သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဖဒိစ်ချိုင်း ဆဆွန်ဆပ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အလုပ်သမား ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းတို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ထိုင်းအလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီး၏ပြောကြားချက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရုံး အွန်းလိုင်း သတင်းစာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇင်းမယ်မြို့မြန်မာနှင့် ပအိုဝ်းဘုန်းကြီးကျောင်း စုပေါင်းဘုံကထိန်သင်္ကန်းနှင့် ဆွမ်းတော်ကြီးကပ်လှူပွဲကျင်းပ
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ဇင်းမယ်မြို့ရှိ ၀ပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ၀ပ်နောင်ခမ်း ပအိုဝ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများ စုပေါင်းဘုံကထိန်သင်္ကန်းနှင့် ဆွမ်းတော်ကြီး ကပ်လှူပူဇော်ပွဲကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသား ဂန္ဓ၀င် ဂီတအနုပညာရှင် "ခွန်သာဒွန်း" ဂုဏ်ပြု ကဗျာ
ပအိုဝ်းအမျိုးသား ဂန္ဓ၀င် ဂီတအနုပညာရှင် ခွန်သာဒွန်း ဂုဏ်ပြု ကဗျာ
The Rangoon University I Know / ကျွန်တော်သိခဲ့သော တက္ကသိုလ်မြကျွန်းသာ
By Kanbawza Win | 27 November 2012
I could not hold back my tears as I witness the live transmission of President Obama speech at the Convocation hall of my beloved Rangoon University.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်းရှားကျော်ကြားတဲ့ ဘာသာရေးအလှူအတန်း ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရာရှိများမှ မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လှောင်းကစားဝိုင်းမှား ဖွင့်လှစ်ပြီး အခွန်ကောက်ခံနေတဲ့ကိစ္စကို အမြင်မတော်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့ခံ တစ်ဦးမှ စာရေးပေးပို့ချက်ကို တင်ပြထားပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့ ပအိုဝ်းကျောင်းသားလူငယ်များ မဟာဘုံကထိန်စီတန်းကပ်လှူ
By ခွန်ထီးခမ်း | နိုဝင်ဘာလ 16 ၊ 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ ပအိုဝ်းရိုးရာ ထမင်းဟင်းဖြင့် လူငယ်များ မိတ်ဆုံစားပွဲကို ကောင်ရွေလူမှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးကွန်ယက်မှ နိုင်ဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ညနေ တောင်ကြီးမြို့ကောင်ရွေရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားရေးအကြောင်းပြ၍ ဆိုက်ခေါင်စံပြကျေးရွာ အနောက်ဘက်ရှိ ခြံယာမြေကို အကွက်ရိုက် ရောင်းစားနေ
By ခွန်မျိုး | နိုဝင်ဘာလ 15 ၊ 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်စံပြကျေးရွာ အနောက်ဖက်ကပ်ရပ်တွင် ဒေသခံတောင်သူများ၏ ၇၅ ပေ ပတ်လည်ရှိ ခြံယာမြေ အကွက်ပေါင်း (၂၆၀) ကွက်ကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အမည်ခံဖြင့် ပအိုဝ်းတပ်မတော် ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးချစ်လယ်နှင့် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း လာဗွေတို့က မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် မတရားရောင်းစားနေပါသည်။
By Kanbawza Win | 15 November 2012
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဥက္ကဌဖလား ဘောလုံးပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဆီဆိုင်မြို့အသင်းအတွက် ရံပုံငွေကောက်ခံမှုများ ရှိနေ
By ခွန်ထီးခမ်း | နိုဝင်ဘာလ 14 ၊ 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဟိုပုံးမြို့တွင် ကျင်းပမည့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဥက္ကဌဖလားဘောလုံးပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် အသင်းအတွက် အသုံးစရိတ်ရံပုံငွေကို ရ.ယ.က အဖွဲ့များမှ ဆီဆိုင်တစ်မြို့နယ်လုံးရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများအားလုံးအလိုက် တစ်အိမ်ထောင်လျင် ၂၀၀ ကျပ်နှုံးဖြင့်ကောက်ခံ လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့ အေးစေတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဘုံကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | နိုင်ဝင်ဘာ (12) 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ရှိ အေးစေတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင် ပုရိမ၀ါမှ ထတော်မူကြသော ပဓာနနာယကဆရာတော်ကြီး အမှူးရှိသော စာချ စာသင် သံဃာတော် အပါး (၃၀၀) ကျော်နှင့် ပင့်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့ ၁၃-၁၁-၂၀၁၂ အင်္ဂါနေ့တွင် စုပေါင်း ဘုံကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်ကျင်းပသည်။
ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ) | နိုင်ဝင်ဘာ (12) 2012
ရခိုင်ပြည် ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်
ဂျွန်နဲ့ အောက်တိုဘာ ရခိုင်ပြည်အရေးအခင်းဟာ ပညာမတတ်မှု ၊ ဥပဒေပညာ နားမလည်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွေဟာ အပေါ်ယံအားဖြင့် ကြည့်လျှင် ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ရပေမယ့် သေချာရဲ့လားလို့ ထပ်မေးရင် ခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက် အထောက် အထားတွေနဲ့ ချပြနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
Posted by Taunggyitimes 8 comments
11 November 2012 | Bangkok Post
A powerful earthquake struck central Myanmar on Sunday, sparking panic in the country's second-largest city as terrified residents fled shaking buildings, witnesses said.
လွယ်တိုင်းလျံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ ကျေးရွာတစ်ရွာစီမှ ရွာသား (2) ဦးစီ မဖြစ်မနေသွားရန် ခေါ်ယူ
နိုဝင်ဘာလ (9) ရက် 2012 ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
2012 - ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(8)ရက်နေ့၊ နံနက်(10)နာရီအချိန်တွင်
လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ကုန်းယောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းယောင်းကျေးရွာတွင်
ကျေးရွာဥက္ကဌ ဦးစိုင်းကျော် ဦးစီးပြီး ကျေးရွာ(14)ရွာမှ ရွာသူကြီးစုစည်းကာ
လွယ်တိုင်းလျံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရှမ်းအမျိုးသားနေ့အတွက် ကျေးရွာ(1)ရွာစီမှ
ရွာသား(2)ဦးစီ တက်ရောက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦး၏
ကွန်းချမ်း | အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် | မဇ္ဈိမ
နိုဝင်ဘာ လကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံသို့ ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း အပါအဝင် သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးစိုးသိန်း တို့လည်း တက်ရောက်ဖွယ် ရှိကြောင်း ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (SNLD) က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
Are radical Islamic ideas being encouraged in Myanmar?
By Zwell Waian | November 6, 2012 | Eleven Media Group | Yangon
This isaresponse to The Irrawaddy magazine's recent article, "Fresh Arakan (Rakhine) Strife Bad Omen for Reform." Although I am notaveteran analyst, I just wanted to point out some facts I thought might have been missed.
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပဲခူးတိုင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ပါတီရုံးသစ်ဖွင့်လှစ်
နိုဝင်ဘာလ (၅) ၂၀၁၂ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မဲန်နီဆိုးတာပြည်နယ်ရှိ စိန့်ပေါလ်ကောလိပ်ကျောင်း မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးတွင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး
ခွန်သောမတ်စ် (တောင်ကြီး) ၊ ၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မဲန်နီဆိုးတာပြည်နယ်ရှိ စိန့်ပေါလ်ကောလိပ်ကျောင်းမှ ထုတ်ဝေတဲ့ စိန့်ပေါလ်ကောလိပ် မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တွင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား မှာ ပအိုဝ်းအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ် ပန်းချီ ဒီဇိုင်းဆရာ ခွန်မျိုးငယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
စိန့်ပေါလ်ကောလိပ်ကျောင်းမှ ထုတ်ဝေတဲ့ စိန့်ပေါလ်ကောလိပ်ဂုဏ်ပြု မဂ္ဂဇင်း စာစောင်တွင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ပအိုဝ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနှင့် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း ခွန်မျိုးငယ်က သူရဲ့ ဖေစ့်ဘုတ်မှာ ရေးသား ဖော်ပြထားပါသည်။
By Kanbawza Win | November 05, 2012
Burma is the first country outside the Communist bloc to recognise the People’s Republic of China in its creation on 1st Oct, 1949 and since then the Burmese Generals have very much admired Chairman Mao, especially his theory that power comes out of the barrel ofagun and they have practiced this theory for more than halfacentury starting from March 2nd 1962 After more than fifty years of gross human rights violation, ethnic cleansing, forced labour, forced relocation, child soldiers implemented by brutal dictatorship and taking the country from the rice bowl to the rice hole of Asia these narco Generals, heads of the rapist Tatmadaw came to realise that they are about to lose their independence.
ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံရောက် ပအိုဝ်းလူငယ် ဗွီဒီယိုဇာတ်ကား ရိုက်ကူး ဖြန့်ချီ
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) | November 04, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
"လွိုဆန်မွိုးဖာ ဒုက္ခအာ" အမည်ရှိ ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်း နှင့် တမားဟံး တပြက့်သာ့ အမည်ရှိ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကား (၂) ကားကို ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံရောက် ပအိုဝ်းလူငယ်များမှ တစ်ပြိုင်ထဲ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
လူထုအကျိုးပြု ဆွေးနွေးလှုပ်ရှားမှုများ ခွန်တန်နွယ် လူငယ်မောင်မယ်များ ဦးဆောင်
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး)၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခွန်တန်နွယ် ကွန်ယက် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား လူငယ်မောင်မယ်များ ဦးဆောင်မှုမှ အားရစရာကောင်းသော လူထုအကျိုးပြု ဆွေးနွေးနှီးနှော်ဖလှယ် လှူပ်ရှားမှုများကို သထုံမြို့၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ ပေါင်မြို့၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်အသီးသီး စည်းလုံးညီညွတ် အောင်မြင်စွာဖြင့် ကျင်းပနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
By Kanbawza Win | November 01, 2012
The Union of Burma, since its inception has been dominated by the majority Myanmar over the Non-Myanmar, it harbours an obsession to be homogeneous state of one country, (Myanmar), one religion (Buddhist) and one language (Myanmar language) over all the Non-Myanmar ethnic nationalities and all faiths. This is why it has the longest ethnic insurrections in the world up to this day since its founding in 1948.
RCSS/SSA-S ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုထံ မတရားဆက်ကြေးတောင်း
October 27, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA-S သည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်ပြီးဖြစ်သဖြင့်၊ လက်ရှိနယ်မြေတွင်း လုပ်ရှားနေသော RCSS/SSA-S 365 တပ်ရင်းသည် ၁၇/၁၀/၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၀၀၇-၂၀၁၂ ဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုထံ မတရားဆက်ကြေးတောင်း ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။
Posted by Taunggyitimes4comments
တောင်ကြီးမြို့မှ ရေးလာတဲ့ပေးစား - တောင်ကြီးမြို့လယ်မှာဖွင့်တာ အနှိပ်ခန်းလား ပြည့်တန်ဆာအခန်းလား
အယ်ဒီတာ မှတဆင့် ပြည်သူအားလုံးနှင့်တကွ တာဝန်ရှိသူများ သိရှိစေလိုပါသည်
အော် .... ကျနော်တို့ပအိုဝ်းအမျိုးသားရဲ့PNO... ခင်ဗျားတို့ ကို ကျနော်နဲနဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်စ ကျနော်တို့ ပအိုဝ်းပြည်သူ\_သားတွေကို နဲနဲလောက် ငုံ့ ကြည့်ပေးပါအုံးလား ... ငဲ့ညှာပြီးတော့ တချိန်က ထမင်းရှင်တွေကို တလုပ်စားသူ့ ကျေးဇူးတွေကို ပြန်သိတတ်ပေးပါအုံးလား .....
တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်နိမိတ်ကျူးကျော် ၀င်ရောက်တိုင်းတာခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နောင်လေကျေးရွာအုပ်စုအပိုင် မြေဧရိယာကို
တောင်ကြီးမြို့ မြို့နယ်မြေစာရင်းဥိးစီးဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဘုရာဖြူရပ်ကွက်နေ ဦးလှဆာ ပန်းတင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး နှင့် ပန်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တာဝန်ယူရသော PNO တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူပေါင်းရ်ျ နောင်လေကျေးရွာအုပ်စု မြေဧရိယာများကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက်တိုင်းတာသွားပြီး ပန်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု မြေဧရိယာအတွင်း ထည့်သွင်းသွားပါသည်။
Miss People’s Choice ဆုရရှိသွားပြီဖြစ်သည့် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ပေါ်ပြူလာ အင်တာဗျူး
ဟိုပုံးမြို့နယ် ၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာ မြင့်မိုရ်စေတီတည်ဆောက်ခြင်း
ကျောက်တန်းကျေးရွာမှာ မြင့်မိုရ်စေတီတည်ခြင်းကို နှစ်ပေါင်း (၂၀) လောက်ရှိနေပြီ။ ခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူး။ ငွေကောက်ပေါင်းများနေပြီး လူကြီးတွေက တစ်ယောက်တလှည့် တာဝန်ယူပြီး လုပ်နေကြတာ ၄င်းစေတီဟာ လူကြီးတွေရဲ့ထမင်းအိုးတဖွယ်ဖြစ်နေတယ်။
ကိုနိုင်ကွန်းအိန် | 19.10.2012 | VOA Burmese
ဂျပန်နိုင်ငံ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ကနေ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဒေသက စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေ နဲ့ အိုးအိမ်ရွှေ့ ပြောင်းခံပြည်သူတွေ အတွက် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ UNFC ခေါင်းဆောင်တွေ က ပြောပါတယ်။
By ငြိမ်းငြိမ်း | October 19, 2012 | Irrawaddy
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ခေါ်တွေ့စစ်ဆေးတဲ့လုပ်ရပ်ကို ရပ်ဆိုင်းရန် ကောင်ရွေလူမှုလှုပ်ရှားရေးကွန်ယက် တောင်းဆို
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး)Tuesday, 16 October 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ကောင်ရွှေလူမှုလုပ်ရှားရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ မှ ခွန်ခမ်းကောင် သည် Weekly Express Times Vol.2, Issue9ဂျာနယ်ပါ “ မြေသိမ်းပါတယ်ဆိုမှ အစားထိုးပေးစရာ ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲ ” ဆိုတဲ့ အင်တာဗျူး စာမျက်နှာကို မိတ္တူကူး ဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့် အာဏာပုိုင် ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲဝင် နန်းခင်ဇေယျာ အတွက် မဲပေးသူ 5,612,161 ဖြင့် ဦးဆောင်နေ
“ မြေသိမ်းပါတယ်ဆိုမှ အစားထိုးပေးစရာ ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲ” အင်တာဗျူး ဖြန့် ဝေမှုဖြင့် ၀န်ခံလက်မှတ် ထိုးခိုင်းခံရသူ၏ ရှင်းလင်းချက်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၅) ပင်းပက်သံမဏိစက်ရုံ စီမံကိန်းကြောင့် အသိမ်းခံရသည့် မြေဧက ၅၀၀၀ ကျော်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း အား မိတ္တူကူးယူ ဖြန့်ခဲ့တာကြောင့် ခေါ်ယူ ဝန်ခံလက်မှတ် ထိုးခိုင်းခံရသူ ကိုခမ်းကောင် မှ မီဒီယာများအား အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ တွေ့ဆုံရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ခွန်တန်နွယ် လူငယ်ကွန်ယက် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး)၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သထုံမြို့၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ ပေါင်မြို့၊ ဘီးလင်းမြို့ (၄)မြို့နယ်မှ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား လူငယ်မောင်မယ်များ စုပေါင်းပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ယနေ့ ၁၄ ရက်နေ့ သထုံမြို့ မဟာအောင်မြေ ရွှေဘုံကျောင်းတိုက်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာ 14 ၊ 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းလူငယ်များဖြစ်သော ခွန်စောအောင်နှင့် ခွန်ခေတ်စံသည် ကောင်ရွှေလူမှုလုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေး ကွန်ယက် အဖွဲကိုယ်စား ပိုလန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Jageillonian University တက္ကသိုလ်၌ Asia Pacific Region ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသော မပာာတန်း ကျောင်းသူကျောင်းသား များ၊ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဆရာအချိုများနှင့် တွေ.ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲ နှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးခေါင်းစဉ်များကို သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်ပာုသိရပါသည်။
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သွားနှင့်ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခမဲ့ စစ်ဆေး
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) | October 11, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆီဆိုင်မြို့ နှင့် ဟိုပုံးမြို့ရှိ နောင်တောင်းပရဟိတ တပ်ဦးဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း တွင် သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများကို အခမဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍမှာ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို ချန်လှပ်မထားသင့်ဟု တိုင်းရင်းသား ပညာရှင်များကဆို
Written by ကော့လီ
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာစကား သင်ကြားမှုကို ချန်လှပ်မထားသင့်ဘူး လို့ ပညာရေးနှီးနှောဖလှယ် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်မှာ တိုင်းရင်းသား ပညာရှင်များက တင်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Monday | October 08, 2012
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာပေ နှီးနှောဖလှယ် ဟော်ပြောပွဲ ကျင်းပ
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) October 2, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား စာပေထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန့်ပွားရေးအတွက် ၀ါတွင်းသုံးလတွင် (လပြည့် - လကွယ်နေ့တိုင်း) ပအိုဝ်းလူငယ် မောင်မယ်များစုပေါင်းပြီး စာပေဗဟုသုတများ နှီးနှောဖလှယ် ဟော်ပြောပွဲတစ်ရပ်ကို ဆီဆိုင်မြို့ ဘုရားဖြူရွာ ခန်းမတွင် ဦးဆောင်ကျင်းပကြောင့် သတင်းရရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် တောင်ကြီးမြို့မှ ငြိမ်းချမ်းခြင်း အနုပညာပြပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပ
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) October 1th, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များ အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Colorful youth Empowerment team (လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုအစီစဉ်) နှင့် တောင်ကြီးမြို့မှ အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် (Art of Peace) အနုပညာပြပွဲ နှင့် ဈေးရောင်းပွဲကို မြစံပယ်ခန်းမ၌ (၁.၁၀.၂၀၁၂) မှ (၅.၁၀.၂၀၁၂) အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများဆွေးနွေး
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) Friday, 28 September 2012
တောင်ကြီးတိုင်းမ် (ဘန်ကောက်) ။ ။ ထုိုင်းနုိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အခွင့်အရေးနှင့်ကန့်သတ်မှု ဆိုင်ရာ ပက်သက်၍ တိုင်းရင်းသားများလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ၊ ရှေ့နေများကောင်စီနှင့်MRPWG က ဦးဆောင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတာ့ခ်ခရိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ အကြား ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကုိုယနေ့နံနက် ၉ နာရီအချိန် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ ဆဲန်ထာရာ ဟိုတယ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘန်ကောက်ရှိ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦ လုပ်ငန်းခွင်အနီး ရေချောင်းမှာ ငါးဖမ်းစဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက် သေဆုံး
Written by ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) ။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးတိုင်းမ် (ဘန်ကောက်) ။ ။ (၂၄. ၉.၂၀၁၂) ရက်နေ့ လုပ်ငန်းခွင် အနားယူချိန် ညနေ(၄း၀၀) နာရီကျော်ခန့်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဘန်ကောက်မြို့၊ န၀မင် အရပ်ရှိ လုပ်ငန်းခွင့်အနီး ရေချောင်းမှာ ငါးဖမ်းစဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုက်သဖြင့် အသက် (၃၈)နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးခွန်မြို့ ရေထဲမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန နှင့် Thai PBS ရုပ်မြင်သံကြားမှ ဦးစီးကျင်းပသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရိုရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလည်းပါဝင်
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) ။ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ချင်းမိုင် ( တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန နှင့် Thai PBS ရုပ်မြင်သံကြားမှ ဦးစီးကျင်းပသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ ရိုးရာဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုကို မမေ့ မပျောက်စေရန် ရည်စူး၍ ကရင်ရိုးရာ ဓလေ့နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖျော်ဖြေ ပွဲတော်ကြီးတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလည်း ပါဝင်တင်ဆက် ကပြဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။
22 September 2012 | By Pyi Myanmar
အင်းလေးနှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အီးယူမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသန်း ကူညီရန် လျာထားကြောင်း အင်းသား စာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတက်ထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူများလိုအပ်ချက်ဖြစ် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ဟု ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြော
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) September 21th, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
၂၀- ၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင်မြို့ နောင်ကျောကျေးရွာ၊ ပုံလောင်းရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မှ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လှသိန်း နှင့် နောင်ကျောအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခွန်မောင်စိုး တို့ အဖွဲ့သည့် ပြည်သူလူထုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
Written by ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) September 19th, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တောင်ကြီးမြို့တွင် ယနေ့ ၁၉ ရက်နေ့က ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပီအဲန်အို) ကမကထပြု ဦးဆောင်ကာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကိုမိုးဇော် | September 17, 2012 | VOA
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက် ပင်လုံလို ညီလာခံကြီးတရပ် ကျင်းပပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ် ဆိုရင် ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းစဉ်ကာလတည်းက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံအပြီးမှာ ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
RCSS/SSA က PNLO တပ်ဖွဲ့ကို လမ်းခုလတ်တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်
September 13, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ချင်းမိုင် (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် မောက်မယ်မြို့နယ် ကန်တူးကြီးဒေသရှိ နားဟီးရွာမှ နမ်းပတက်ရွာသို့ စားနပ်ရိက္ခာ သယ်ဆောင်သည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်-PNLO တပ်ဖွဲ့ကို ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (RCSS/SSA-S) က လမ်းခုလတ်တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။
September 13, 2012 | Taunggyitime
ဒီနေ့မနက် ၁၁း ၁၅ နာရီအချိန်မှာ RCSS/SSA (အာစီအက်အက်) က PNLO ပီအဲန်အယ်အိုကို ပစ်လိုက်တယ်။ ကန်တူးကြီးဒေသရှိ နမ်းပတဲက်နှင့် နားဟီးရွာကြားမှာ မိနစ် ၃၀ လောက် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။
"RCSS/SSA က ဝ (UWSA) နဲ့လည်းပြသနာ တက်တယ်။ လားဟူပြည်သူ့စစ်နဲ့လည်းပြသနာဖြစ်တယ်။ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့လည်း ပြသနာဖြစ်တယ်။ (SSS) အက် ၃ လုံးနဲလည်း ပြသာနာဖြစ်တယ်။ ယခု PNLO ပါ ပြသနာရှာလာတယ်ဆိုတာ RCSS/SSA က ဘယ်လိုမျိုးတပ်လည်းတော့ နားမလည်တော့ဘူး" လို့ PNLO တပ်မှူးတစ်ယောက်က ပြောတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားအရေး ညီလာခံ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည်
ဖနိဒါ | အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ မြန်မာအစိုးရကို တော်လှန်ပုန်ကန်နေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုအခြေပြု တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေး နည်းလမ်း ရှာသည့်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေး ညီလာခံကြီးတခုကို အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပမည်
ဖြစ်ကြောင်း ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌက ပြောသည်။
ကျော်ခ | September 5, 2012 | Irrawaddy
ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-S) တပ်ဖွဲ့နှင့် “၀” ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော်(UWSA) တပ်ဖွဲ့တို့ နှစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားနေကြာင်း သတင်းရရှိသည်။
သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
မြန်မာအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်-PNLO မှ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ တောင်ကြီးမြို့၊ မောက်မယ်မြို့၊ ဆီဆိုင်မြို့နှင့် မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့ ၄နေရာ တောင်းဆိုခဲ့ရာ သထုံဆက်ဆံရေး ရုံး ဖွင့်လှစ်မည့်ကိစ္စကို အစိုးရဘက်မှ သဘောမတူခဲ့ကြောင်း PNLO အတွင်းရေးမှူး ခွန်မြင့်ထွန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
Conducted by Khun Khit San | August 30, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မေး - ပအိုဝ်းအမျိူးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO) က ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံမှု ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ။
ဖြေ - ကျနော်တို့ အခုတစ်ခေါက်ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ဆိုရင် (၆) ကြိမ်မြောက်ရှိပါပြီ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကို ရန်ကုန်မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ သဘောတူထားတယ်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ ခလရ ၄၂၃ နှင့် ၄၂၄ ငွေကြေးများ မတရားတောင်းခံလျက်ရှိ
ဆီဆိုင်မြို့ ရှိခြေလျင်တပ်ရင်း အမှတ် ၄၂၃ နှင့် ၄၂၄ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စုများမှ ရွာ (၁၀) ရွာခန့်ကို ငွေကြေးများ မတရားတောင်းခံလျက်ရှိ
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO) နှင့် ပအိုဝ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (PUSO) တောင်ကြီးမြို့၌ တွေ့ဆုံ
Reported by Khun Khit San, August 29, 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) နှင့် ပအိုဝ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (PUSO) သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်တွင် တောင်ကြီးမြို့ မင်းကွန်းကျောင်း၌ တွေ့ဆုံခဲ့
Posted by Taunggyitimes 12 comments
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ် ၊
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
August 28, 2012 | SHAN
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့တော်တောင်ကြီး၌ ယခုလမကုန်မီ ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကပြောသည်။
ကွန်းချမ်း | တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် အလွတ်သဘော နှစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) က စနေနေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲလိုက်သည်ဟု PNLO က ပြောသည်။
သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် PNLO ကိုယ်စားလှယ်တို့ ယနေ့ နံနက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပဏာမအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်သည်။
ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တောင်ကြီးမြို့သို့ ရောက်ပြီ (သတင်းအကျဉ်း)
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို လာရောက်ကြိုဆိုသည့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများ (ဓာတ်ပုံ-ခွန်ခေတ်စံ)
အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးရန် PNLO အဖွဲ့ ထွက်ခွာ
NMG ဇော်ကြီး။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် PNLO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ယနေ့ နံနက်က ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်သို့ ထွက်ခွာသွားသည်။
PNLO ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးရန် ထွက်ခွာပြီ
သြဂုတ်လ ၂၃ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်-PNLO သည် ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် ယနေ့ ထွက်ခွာသွားပြီဟု သိရသည်။
ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တွေ နဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်ကြား တင်းမာမှုတွေကြီးထွား
ကိုမိုးဇော် | 21.08.2012 | VOA
အပစ်အခတ်ရပ်ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းရဲ့ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းတခုကို အစိုးရတပ်ဖက်က ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထပ်မံရုပ်သိမ်းခိုင်းနေတဲ့အပေါ် လက်မခံရာက စစ်ရေးအရ တင်းမာမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။
PNLO နှင့် KNU တို့ ဦးအောင်မင်းနှင့် ဆက်လက် တွေ့ဆုံမည်
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် | (မဇ္ဈိမ)
ပြည်နယ် အဆင့်၌ ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက် ပအိုဝ့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) သည် ယခု သီတင်းပတ်ထဲတွင် တောင်ကြီး မြို့၌ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကော်မီတီနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု PNLO ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။
PNLO နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဒီသီတင်းပတ်မှာ ဆွေးနွေးမည်
2012-08-19 | RFA
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ပဏာမအဆင့် ညှိုနှိုင်းချက်အရ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အထိ တောင်ကြီးမြို့မှာ ပအိုဝ့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) နဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ နှစ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးလဲ့ | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် | (မဇ္ဈိမ)
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာပြည်တဝှမ်း မြစ်ချောင်းများ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်နေသလို ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တွင်လည်း သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ စ၍ မိုး အဆက်မပြတ် သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး တောင်ကျရေများ ကျဆင်းမှု
ကြောင့် လားရှိုးမြို့ပေါ် ရပ်ကွက် ၇ ရပ်ကွက်တွင် ရေကြီး၊ ရေမြုပ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
အထက်ပေါင်းလောင်းဆည်ကြောင့် ဒေသခံနစ်နာမှုရှိကြောင်း ကယန်းလူငယ်အဖွဲ့ ရှင်းလင်းပြောဆို
သြဂုတ်လ ၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
၂၀၁၂ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အပြီးသတ် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သောသျှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့နယ်မှ အထက်ပေါင်းလောင်းဆည် စီမံကိန်းကြောင့် ရွာ ၂၃ရွာမှာ အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး နစ်နာမှုများရှိနေကြောင်း ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ် -KYNG က မန္တလေးမြို့၌ ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (Pa-O University Old Students Organization) ကို တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်သူရိန်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO) နှင့်
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ
ပအိုဝ်းဗွေဗွန်ထွက် ပါင်မူ ဘုန်းကြီး (ခ) ဦးခွန်ခမ်းအူ ပကာခမ်း ကွယ်လွန်
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂) ရက် ကြာသပတေး နေ့တွင် ဦးခွန်ခမ်းအူ ပကာခမ်း (ခ) ဗွေဗွန်ထွက် ပါင်မူ ဘုန်းကြီးလူထွက် အသက် (ရရ) နှစ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်းခရိုင်တွင် မော်တော်ယဉ် မတော်တဆ တိမ်မှောက်မှုဖြင့် ဘ၀တပါးသို့ ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပအိုဝ်းလွတ်တော်အမတ်၊ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တာဝန်အသိစိတ်
By ခမ်းလွယ်မော် | ဇူလိုင်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းရေးမှာ အထစ်အငေါ့တွေရှိပေမယ့် ရှေ့ကိုတော့ သွားနေတာဟာ တနှစ်တောင်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ၊ ထင်သာမြင်သာမှုတွေကိုလဲ တွေ့မြင်လာရပါပြီ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေသူ) များကို ပြန်လွတ်ပေးနေတာတွေ၊ စာပေစီစစ်ရေးမူဝါဒကို လျှော့ပေးနေတာတွေ၊ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောနေတာတွေ (တချို့ဆိုလက်မှတ်တောင်ထိုးပြီးကုန်ပြီ) စတာတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့ ထင်သာမြင်သာတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
RFA - ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်နေတဲ့ ပအိုဝ့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် ဦးခွန်မြင့်ထွန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ ပအို့ဝ် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို ပအို့ဝ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဒေသမှာရှိတဲ့ ဟိုပုန်းမြို့နယ်က ပရဟိတကျောင်းကို သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက အာအက်ဖ်အေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း ပဏာမအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဂျူလိုင် ၂၂ ရက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စေလွှတ်
Monday, July 23, 2012 | By သျှမ်းသံတော်ဆင့်
PNLO Chairman, Khun Okker
ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် PNLO က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီနဲ့ ပဏာမအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ယမန်နေ့ (ဂျူလိုင် ၂၂ ရက်)မှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စေလွှတ်ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး PNLO ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ပအိုဝ်းသံဃာပျိုများအဖွဲ့၏ သဘောထားတစ်ရပ်ကို အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
PNO မှ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ မတရားပြုလုပ်ချက်အရ မတရားသဖြင့် အဆုံးဖြတ်ခံရသော
၀င်းယဆရာတော် ဦးသြဘာသ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပအိုဝ်းဒေသ
ပအိုဝ်းသံဃာပျိုများအဖွဲ့က ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်းတွင် သဘောထားတစ်ရပ်
Posted by Taunggyitimes 37 comments
THE IDEA OF MYANMAR: Aung San Suu Kyi’s ethnic-minority problem
PNO အမည်သုံးပြီး ၀င်းယကိစ္စသတင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း ပအိုဝ်းဒေသအတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် စာလိုက်ဖြန့်ဝေ
ဇူလိုင်လ (၈) ရက်၊ ၂၀၁၂
၀င်းယရွာတွင် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်သော "PNO နှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားတို့ သိစေဖို့" ဟူသော သတင်းဆောင်းပါးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြားပညာဗုတ်၊ ဟိန်းထွန်း၊ တိုးယံ စသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုတို့က
PNO ဟူသော ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၏ နာမည်ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ပေါ်က
၀င်းယသတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ စာများ လိုက်လံဖြန့်ဝေနေသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်တလုံးမြို့နယ်ခွဲမှာနေထိုင်တဲ့ ဒေသခံလူငယ်တစ်ဦးမှ
တောင်ကြီးတိုင်းမ်သို့ ရင်ဖွင့်ရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာကို ရေးလာတဲ့ပေးစာကဏ္ဍမှာ အောက်ပါအတိုင်း
By Khun Skyrock | စန္တာခမ်း
ပအိုဝ်းစာပေလောက အခြေအနေတွေကို သုံးသပ်ပြရရင် မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တွေ ဟိုအရင်တုန်းကထက် ပိုပိုပြီး ထုတ်ဝေလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထွက်ရှိတဲ့ ပအိုဝ်းစာစောင်တွေက တစ်နှစ်မှ တစ်စောင်သာ အသီးသီး ထုတ်ဝေလေ့ရှိကြတယ်။ အချို့စာစောင်တွေဆိုရင် တစ်နှစ်ပဲ ထုတ်နိုင်ပြီး ပြန်ငုပ်သွားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အချို့လည်း ကာလတာအားဖြင့် (၂)နှစ် (၃)နှစ်လောက်ပဲ ထုတ်ဝေကြပြီး လျိူကနဲ ပြန်ပျောက်သွားလေ့ရှိတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြာင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
NDF ၏ ပါတီသစ် လက်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တောင်သူကြီးများကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ မျိုးသန့် ၊ မဇ္ဈိမ)
တာကလူး | June 28, 2012 | နိရဉ္စရာ
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ကြားမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကို မွတ်ဆလင် (၅)ဦးက ၀ိုင်းပြီး လက်နက်လုရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အစိုးရငြိမ်းအဖွဲ့ PNLO နှင့် အပစ်ရပ်မည်၊ မယ်တော်ဆေးခန်း ကူညီမည်
ဖနိဒါ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တွေ့ဆုံမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေရာ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော်ဆးခန်းသို့ ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက်ပြီး အလှူငွေများ ပေးအပ်ကာ ဘန်ကောက်မြို့တွင်လည်း ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PNLO တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
THE HIGH COST OF EDUCATION: The Plight of Pa-O Children
By Khun Robert
Pa-Oh children study at Buddhist temple
Due to the lack of education facilities provided by the government, Pa-O children from Kauk Ta Lone Township, Southern Shan State are sent away from their home atavery young age to various areas in Myanmar/Burma1 and consequently suffering from child rights abuses and exploitation in monasteries and houses.
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပိုများလာဟု PYO ပြော
ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးမှ ခွန်ချန်ကီ (Photo: SHAN)
Naypyitaw’s drug eradication programme doesn’t work in Pa-Oh areas: Researcher
Tuesday, 26 June 2012 15:57 S.H.A.N.
According to researcher Khun Chankhe, Pa-Oh Youth Organization (PYO), the previous two5year phases of Naypyitaw’s 15 year master plan have failed to end poppy cultivation in the Pa-Oh Self-Administered Zone (SAZ) of Shan State.
Afghan boys play soccer in front of the remains ofa1,500-year-old
Buddha statue which was destroyed by the Taliban in Bamiyan.
By Kanbawza Win | June 20, 2012
Meticulously planned by the hardliners of the quasi civilian government of Burma has successfully producedasectarian violence between the Muslim and the Buddhist communities in Western Burma of Arakan State. At the time of this writing the official figure shows more than 50 person were killed and thousands have been homeless, but the real figure will be as usual much higher. It is still very fragile.
ဂျာနယ်လစ်နဲ့ ကျင့်ဝတ် (၃)၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု၊ ကြားနေမှု၊ ဘက်မလိုက်မှု၊ ဘက်မျှစေမှုတို့၏ ဝိရောဓိ
Written by ဇေ၀င်းနောင် | Sunday, 17 June 2012 | Eleven Media Group
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု၊ ကြားနေမှု၊ ဘက်မလိုက်မှု၊ ဘက်မျှစေမှုတို့ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာမှ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်မှာ ပရောဖက်ရှင်နယ် ဆန်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆတွေနဲ့အတူ ဂျာနယ်လစ်တွေ သုံးလာခဲ့ကြတာပါ။
By Qing Minya, on Sunday, June 17, 2012
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို အပုပ်ချဆောင်းပါးဖြင့် ထိပါးစိန်ခေါ်လာသော ဧရာဝတီမီဒီယာ
By Myo Set on Saturday, June 16, 2012
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်စိုးမှုကို မီဒီယာကနေ တရားဝင်စိန်ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားတင်ပြသူ - ခမ်းဟော်ခွန် | ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းအမျိုးသား တစ်ယောက်အနေဖြင့် PNOနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်စေလိုပါ။ ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်နေသူတို့ကိုလည်း မနှစ်သက်ပါ။ သို့သော် တောင်ကြီးတိုင်းမ်တွင် မကြာသေးမီက ဖော်ပြထားသော ဗိုလ်မှူး ခွန်လာ ဆိုသူ၏ စာကိုဖတ်ရပြီး အမှန်တရားကို သိစေလိုသောကြောင့် ဤသတင်းဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးကြောင့် PNO-၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက် သွားခဲ့သော် အမှန်တရားအတွက် နားလည်ခွင့်လွတ် ပးကြပါရန် ပအိုဝ်း ပြည်သူများကို ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
﻿ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှ ဒီမိုကရေစီ ဟန့်တားမှု - ဆောင်းပါး
ဖိုးသောကြာ -၁၂-၆ -၂၀၁၂
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ အနာ၈တ် အလင်းရောင်မျှော်လင့်နေတဲ့ ပြည်သူတွေမှာ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်တဲ့ ဒဏ်၊ အလုပ် လက်မဲ့ ပေါများတဲ့ ဒဏ်တွေ ပျောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီခြေလှမ်းတွေ ရှေ့ တိုး ဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် က ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ "ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့် "ဆိုသလို သို့လောသို့ လော ၀ိဝါဒ တွေးစရာတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
Arakan Rohingya National Organization Contacts With Al Qaeda and With Burmese Insurgent Groups on Thai Border
အကျင့်ပျက် အရာရှိများကြောင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ စိုးရိမ်စိတ်ကြီးထွားနေ
Wikileaks မှ ပြောသည့် ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် Al Qaeda ၊ မြန်မာ သောင်းကျန်သူများ အဆက်အသွယ် ရှိခြင်း
By James Mmt on Wednesday, October 19, 2011 at 10:49pm
အကျဉ်းရုံးအနေဖြင့် - ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ARNO ဟာ သူတို့အဖွဲ့အစည်းနေရာအား ကရင်နီ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNPP ထိမ်းချုပ်ထားသည့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်မြေအတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက် 2002 သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းမှာ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးဘက်က အစီရင်ခံစာအရ ARNO ဟာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ လှုပ်ရှားနေသည့် Democratic Alliance of Burma နှင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ကြိုးပန်းခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ဒေါ်လာသန်း ၈၀၀ ကျော်ပေး
ဖနိဒါ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၊ သြစတြေးလျ၊ ဥပရောပသမဂ္ဂနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံများက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅ဝဝ ကျော် ကနဦး ကူညီထောက်ပံ့ မည်ပြီး ထပ်မံ၍လည်း သန်း ၃ဝဝ ကျော် ပေးဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ကတိ ပေးလိုက်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းနေသော
ကျောင်းကြီးလမ်း ရပ်ကွက် နှင့် နာဇီရပ်ကွက် မြင်ကွင်းအား
နေ့လည် ၂း၃၀ နာရီခန့်က တွေ့ရစဉ်
ရိုဟင်ဂျာ၊ အနောက်ကမ္ဘာ၏ပစ်ဖဲနှင့် မြန်မာအတွက် Sensitive Area မောင်တော
By Myo Set on Monday, June 11, 2012
ကျနော့်ရင်တွေပူနေပါတယ်။ ကျနော်အခု ထိုင်နေသောနေရာတွင် အေးစက်နေသော မိုးရေများ ကျဆင်းနေပါသည်။ သို့သော် မိုင်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ဝေးသော အမိမြန်မာနိုင်ငံမှ ရခိုင်ဒေသအတွက် အများကြီးစိတ်ပူနေပါသည်။
Prominent 8888 Generation Student Leaders Spoke on Bengali Rohingya and the Current Riots in Burma
Ko Ko Gyi and Min Ko Naing
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများကို စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
စစ်တွေမြို့ ဗျိုင်းဖြူရွာ အခြေအနေစိုးရိမ်ရေမှတ်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိ
Written by The Voice Monday, 11 June 2012
လူမြိုးရေး အသှငျဆောငျသော အကွမျးဖကျမှုမြားကွောငျ့ အရေးပျေါအခွအေနေ ထုတျပွနျထားရသော ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့မှ ယမနျနကေ့ ထှကျပွေးလာသော ဘင်ျဂလီ ဆူပူအကွမျးဖကျသူ မြားနှငျ့ ဗြိုငျးဖွူရှာအနီး သံတျောလီ ကြေးရှာမှ ဘင်ျဂါလီမြားစုပေါငျးကာ စဈတှမွေို့ ဗြိုငျးဖွူရှာကို မီးရှို့ရနျ စီစဉျနကွေကွောငျး ဒသေခံမြားက ဇှနျလ ၁၁ နေ့ နံနကျ ၉နာရီ ၃၀ မိနဈတှငျ ပွောကွားသညျ။
စစ်တွေမြို့၏ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ
By The Voice Weekly | June 10, 2012
ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြား၏ ဆူပူ အကွမျးဖကျမှုမြား ဖွဈပှားနသေော ဘူးသီးတောငျ မောငျတော မွို့မြား၏ လုံခွုံရေး အခွအေနမှော ပွနျလညျ ကောငျးမှနျလာခွငျး မရှိသညျ့အပွငျ ရခိုငျပွညျနယျရှိ စဈတှေ၊ သံတှဲ၊ ရမျးဗွဲ၊ ကြောကျဖွူမွို့မြားသို့ပါ ကူးစကျလာခဲ့သဖွငျ့ နိုငျငံတျော သမ်မတရုံးက ဥပဒကေဲ့သို့ အာဏာတညျသော အမိနျ့တဈရပျ ထုတျပွနျကာ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အရေးပျေါ အခွအေနေ ကွညောလိုကျသညျ။
Buddhists gather at Shwedagon Pagoda in Rangoon to pray
for an end to the violence in Arakan State.(Photo: The Irrawaddy)
By The Irrawaddy | June 10, 2012
Tensions in Arakan State continue to climb afterafresh outbreak of violence on Sunday left five people injured, despiteagrowing security presence in the state following attacks on Buddhist villages by Muslim mobs on Friday.
ကျော်ခ | June 9, 2012 | Irrawaddy
Yangon, Sat June 9, 2012 | Eleven Media Group
မောင်တော တွင် လူ ရာနှင့် ချီ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ | စစ်တွေ တွင် အကြမ်းဖက်ရန် လို မှုများ ဆက်လက်ရှိနေ
ယနေ့ နံနက် ပိုင်း က ရခိုင် ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့ရှိ နာဇီ ကျေးရွာ နှင့် ကသဲ ကျေးရွာ တွင် နေ
ထိုင်ကြသည့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ အချို့သည် ဒေသခံ ရခိုင် လူမျိုး အချို့ကို ရန်ပြု တိုက်ခိုက်
ခြင်းများ ရှိ နေပြီး လေယာဉ် ကွင်း အနီး ရှိ ကျေးရွာ တစ်ချို့နှင့် အချို့နေရာ များ တွင် အိမ်
နှင့် ပစ္စည်းများ ကို မီး ရှို့ မှု များ ရှိ ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
Friday, 08 June 2012 | Weekly Eleven
မောင်တော မြို့တော်ခန်းမ အနီးရှိအိမ်များကို ဘင်္ဂါလီများက လူအုပ်စုဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသဖြင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးနေရကြောင်းနှင့် လက်ရှိ ဆိုးရွားနေသော အခြေအနေကို အလျင်အမြန်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ရခိုင် ပြည်နယ် မောင်တော မြို့မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တွေ လူစုလူဝေး နဲ့အကြမ်းဖက်
မီးရှို့မှု တွေ ၊ ဓာလုပ်တာ ကြောင့် ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ် မိုးပေါ် ထောင်ဖောက် ပြီး
လူစု ခွဲ့ခဲ့ ရသည်။
By DVB | June 8, 2012
Fresh riots have flared in Northern Arakan state withagroup of Muslim residents destroying local restaurants and schools this afternoon as sectarian tensions boil over in the wake of anti-Muslim violence that left ten pilgrims dead on Sunday.
U.N. working to offer poppy growers ‘alternative livelihoods’
Wednesday, 06 June 2012 15:03 Mizzima News
Burma remains the world's second largest opium poppy grower after Afghanistan, accounting for 23 per cent of opium poppy cultivation worldwide in 2011.
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတောင်သူများ၏လယ်ယာမြေနှင့်လယ်တဲများ မီးရှို့ပြီး ဓါးနှင့်ခုတ် ဖျတ်ဆီးခံခဲ့ရ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ကမွန်းအင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း
လယ်ယာမြေ(၄၃၇)ဧကနှင့်ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြာင်း သိရှိရပါသည်။